माइक्रोको ठक्करबाट मोटरसाइल सवार बाबुछोराको मृत्यु
७, माघ तनहुँ । आँबुखैरेनीबाट डुम्रेतर्फ आउँदै गरेको माईक्रोबसले विपरिददिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकललाई बन्दिपुर–४ ठुल्ढुंगामा बुधबार ठक्कर दिँदा घाइते भएका भरतपुर–६ चितवनका बाबुछोरा ६० वर्षिय बाबु बद्री खनाल र ३७ वर्षिय सुजनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । माइक्रोबसको ठक्करबाट गम्भिर घाइते भएका बाबुको डुम्रेस्थित लक्ष्मी अस्पतालमा र छोराको काठमाडौंको अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । आफन्तजनले छोराको शव काठमाडौंबाट र बाबुको शव दमौली अस्पतालबाट…विस्तृत समाचार »
निजी भ्रमण भन्दै पूर्व राजा बैंककतिर
७, माघ काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक प्रस्थान गरेका छन् । उनी साढे १ बजेको फ्लाइटबाट एक्लै त्यता लागेका हुन् । केही सहयोगीसाथ विमानस्थल पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिंया दिन मानेनन् । तर उनको भ्रमणलाई नितान्त निजी भ्रमण भनिएको छ । विस्तृत समाचार »
भारतीय टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अन्तरर्वाता (भिडियो सहित)
७, माघ काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय टेलिभिजन च्यानल न्युज २४ लाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालको संविधानका बारेमा भारतलाई भएको ‘मिस अण्डरस्ट्याण्डिङ’ कम हुँदै गएको दावी गरेका छन् । उनले अन्तरर्वातामा नेपालको संविधानका विषयमा भारतीय सरकारलाई केहीले गलत सूचना दिएको र त्यो विस्तारै स्पष्ट हुँदै गएको बताएका छन् । पहिले नेपालको संविधानको विषयलाई लिएर भारतमा भएको गलत सूचना बेग्लै कुरा भइसकेको वताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले…विस्तृत समाचार »
सेनामा एक सय ७५ जनाका लागि जागिर खुल्यो
७, माघ काठमाडौँ । नेपाली सेनामा एक सय ७५ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । नेपाली सेनाको कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय जंगी अड्डाले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्दार पदहरुका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका पदहरुमा समावेशी तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । आवेदकले आवश्यक कागजात…विस्तृत समाचार »
राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम परिवर्ततन गर्ने निर्णयको सांसदहरुद्धारा विरोध
७, माघ काठमाडौँ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम परिवर्ततन गर्ने सरकारको निर्णयको संसदमा कडा विरोध भएको छ । संसदको विशेष समय र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले परिवर्तन गरेकोमा आक्रोश पोखेका छन् । सांसद रामकृष्ण यादवले संसदको विशेष सयमा बोल्दै सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरे । यादवले देश, प्रजातन्त्र…विस्तृत समाचार »
शिक्षामा लगानीको नाममा भारतीय दुतावासले यसरी समस्या थप्दै
७, माघ काठमाडौँ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुगाउँदै आएको भारत सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण शिक्षा क्षेत्रका योजना अलपत्र बन्न पुगेका छन् । राजदूतावास मार्फत वजेट उपलव्ध गराउँदै दर्जनौ विद्यालयहरु बनाइसकेको दूताबासले पछिल्ला वर्ष यता सञ्चालित केही योजनाहरुमा पूरा वजेट स्वीकृत नगरिदिंदा निर्माणाधीन योजनाहरु अधुरा रहन गएपछि समस्या थपिएको हो । कास्की पोखराको लामाचौरमा सञ्चालित इन्द्र राज्यलक्ष्मी उच्च माध्यामिक विद्यालयको फर्निचर सहितको भवन निर्माण प्याकेज…विस्तृत समाचार »
बबरमहलमा थन्किएका गुन्डानाइके गोप्य गतिविधिमा सक्रिय
७, माघ काठमाडौँ । गुन्डा नाइके दीपक मनाङ्गे र अभिषेक गिरीका विषयमा तपाईलाई चासो लाग्न सक्छ, उनीहरू कता हराएका छन् भनेर । उनीहरूलाई आजकाल काठमाडौंको बबरमहलस्थित विशेष अदालततिर बाक्लै भेट्न पाइन्छ । कुनै समय राजधानीमा ‘डन’ अर्थात गुन्डा नाइकेको नामले चर्चित मनाङ्गे विशेष अदालतमा तारिख लिंदालिंदै हत्तु भएको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ । अबैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दा…विस्तृत समाचार »
भुकम्पबाट क्षति ग्रस्त विद्यालयलाई जस्ता पाता वितरण
७, माघ गोर्खा । चिल्डे«न–नेपाल पोखराद्वारा गोर्खा जिल्लाको खरीबोट गा.वि.स.का भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पाँच सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जस्ता पाता वितरण गरेको छ । चिल्डे«न–नेपालले भानु ज्योति नि.मा.वि., बौद्ध हिमाली, वालाङ्ग प्रा.वि., स्यार्तन नि.मा.वि.र प्रभा मा.वि. मा कुल ५३ बण्डल जस्ता वितरण गरेको हो । चिल्डे«न–नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले विद्यालयको भौतिक निर्माण मात्र नभई सामाजिक तथा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि समेत योगदान गर्न…विस्तृत समाचार »
७, माघ काठमाडौं । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले महाप्रवन्धकमा नियुक्ति गरेका सत्यनारायण मेहताले आपूर्ति मन्त्रालयबाट पत्र नै नलिई आफूखुसी निमित्त महाप्रबन्धक लेखेर काम गर्दै आइरहेका छन् । मेहता नेशनल ट्रेडिङका नवौं तहका कर्मचारी हुन् भने उनलाई असोज २३ गते कोइराला नेतृत्वको सरकारले महाप्रवन्धक बनाउने निर्णय गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पटक–पटक महाप्रवन्धक पदको पत्र लिन बोलाउँदा पनि…विस्तृत समाचार »
क्यासिनोमा एआईजीको सेटिङ ?
७, माघ काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख एआईजी प्रतापसिंह थापासँगको सेटिङका कारण क्यासिनो माजोङ खारेज हुनबाट जोगिएको छ । नेपाली जुवाडेहरुलाई भारतीय रासन कार्ड बनाएर जुवा खेलाउँदै आएको उक्त क्यासिनोबाट प्रहरीले नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, एआईजी थापाकै कारण जुवाडे छुटेका छन् । क्यासिनो व्यवस्थापन नियमावलीमा क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश गराएको खण्डमा लाइसेन्स नै रद्द हुने प्रष्ट प्रावधान छ । माजोङ क्यासिनोले नेपालीलाई…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1815 1816 1817 1818 1819 Older Last ›